Iberbox: maneja mukuru kune ako backups | Linux Vakapindwa muropa
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha iwe chaunofanirwa kuita semushandisi kana system mutariri ndeyekugara uchiita mabhakuki. Iwe unotoziva kuti iwe unofanirwa kugadzira chirongwa chinoenderana nekukosha kwedata raunobata, kugadzirisa iyo yakakodzera frequency. Saka hapana zvinoshamisira zvichauya kana hard drive ikatadza, kana kana paine huori hwe data, hutachiona nemamwe malware akadai sehlengwareware, nezvimwe. Y Iberbox inogona kukubatsira iwe kubata ako backups
Iyi software ichakubvumidza iwe gadzira, gadzira uye utarise ako ekuchengetedza, Izvo zviri nyore, iine intuitive graphical interface, uye yepakati. Zvakare, inowanikwa kune akawanda mapuratifomu akadai seWindows, Android, Linux, uye macOS (iOS munguva pfupi zvakare) Saka unogona kuishandisa pane ako ese zvigadzirwa zvakaenzana. Ehezve, iwe haufanire kunetseka nezve kuisirwa kwayo, zviri nyore kwazvo kumisikidza uye unazvowo mune zvimwe zvitoro zveapps zveiyo distros, senge iri Ubuntu Software Center ...
Uye zvakare, Iberbox zvakare iri software iyo kunounza kuvimba, sezvo iwe uchigona kumisikidza nyore yako yega backup zano munzira yakasarudzika, kusimudzira kuchengetedzeka kwedata rako. Iyo zvakare inoremekedza zvakavanzika, nekuti iwe chete ndiwe unokwanisa kuwana yako data yekutenda kunongedzera-kune-poindi kunyorera uye, nekutenda kune iro gore rebasa, iwe unogona zvakare kuve neyako data kubva chero kupi uye pane chero chishandiso.
Uye, kupfuura zvese, seri kweichi chirongwa chakavanzika chiSpanish tarenda. Sezvo mubatsiri wayo ari Francisco Javier Serrano Rodríguez, doctorate mukombuta yesainzi kuYunivhesiti yeSalamanca, uye ane ruzivo mune yakakurumbira MEGA gore rekuchengetedza chikuva. Kune rimwe divi, kuna Jesús F. Rodríguez-Aragón, mumwe mushandirapamwe zvakare ane doctorate kubva kuyunivhesiti imwechete uye aine ruzivo rwakafanana kuMEGA ...
Naizvozvo, kana iwe uchida kutsigira kugona kweSpanish, uye uine data rako zvakachengetekaKunyanya kana iwe uri telecommuting, ini ndaikurudzira kushandisa iri nyore uye inoshanda mhinduro.
Mamwe mashoko - Iberbox
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Iberbox: maneja mukuru kune ako backups
Alpha 24 ya0 AD yakatoburitswa uye ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo